ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်အကဲခတ်—ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိပြုမိရာ | နိုးလော့! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သမ္မာကျမ်းစာဟာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လက်တွေ့ကျသေးရဲ့လား
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ခေတ်ကုန်သွားခြင်းမရှိဘဲ အမြဲလက်တွေ့ကျနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများ—ရိုးသားခြင်း
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ခေတ်ကုန်သွားခြင်းမရှိဘဲ အမြဲလက်တွေ့ကျနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများ—ချုပ်တည်းခြင်း
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ခေတ်ကုန်သွားခြင်းမရှိဘဲ အမြဲလက်တွေ့ကျနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများ—သစ္စာရှိခြင်း
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ခေတ်ကုန်သွားခြင်းမရှိဘဲ အမြဲလက်တွေ့ကျနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများ—ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ် အကဲခတ် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိပြုမိရာ
မိသားစုအတွက် အကူအညီ သေခြင်းအကြောင်း ကလေး မေးလာတဲ့အခါ
တွေ့ဆုံ​မေးမြန်းခန်း ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး သူ့အသင်းတော်ကနေ ဘာကြောင့် နုတ်ထွက်လာ
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား အမြင့်ပျံငှက်တွေရဲ့ ကော့နေတဲ့အတောင်များ
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို ပညာရှိရှိ အသုံးပြုပါ
သင်ခန်းစာ ၇– ပေးကမ်းခြင်းက ပျော်ရွှင်စေ
နိုးလော့! | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီကာအွန်ဒီ ကီရွန်ဒီ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တီဂရင်ယာ တူရကီ တော့ခ် ပီဆင်း တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေး ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗီယက်နမ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယား မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူဗာလီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အီတလီ အီလိုကို အူရ်ဒူ အေးဝေး
ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာ တိုးတက်လာပေမဲ့ ရောဂါဘယတွေကလည်း ထူပြောလာတယ်။ တကယ်တော့ ရောဂါအတော်များများကို မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
၂၀၃၅ ခုနှစ်ကျရင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်သူဦးရေ ၂၄ သန်းရှိလာနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ခန့်မှန်းတယ်။ လက်ရှိအရေအတွက်က ၁၄ သန်းကျော်ရှိတာကြောင့် အဲဒီကိန်းဂဏန်းက ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးလာတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအရေအတွက်ရဲ့ ထက်ဝက်လောက်က အရက်သေစာ အလွန်အကျွံသောက်တာ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းတာ၊ အဝလွန်တာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိမှန်တာတွေကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ရတာဖြစ်တယ်။
ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ သွေးသွင်းခြင်းလို ကုထုံးကနေ နွားရူးရောဂါ ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ “တွေ့ရှိချက်အရ ကုလို့မရတဲ့ ဒီရောဂါက ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေဆဲပဲဆိုတာသိရလို့ အရမ်းစိုးရိမ်မိတယ်။ ဒီရောဂါဟာ သွေးနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစားထိုးကုသတာတွေကနေ ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ပြောကြတယ်” ဆိုပြီး လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ အန်ဒရူး မီလာက ပြောခဲ့တယ်။
စိတ်ကျဝေဒနာဟာ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကို ထုတ်လွှတ်ပေးတာကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးလာစေနိုင်ကြောင်း နော်ဝေးနိုင်ငံသား ၆၃,၀၀၀ လောက်ကို ၁၁ နှစ်ကြာ လေ့လာချက်အရ သိရတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်းတစ်ခုကြောင့်ပဲ မဟုတ်ဘူး၊ စိတ်ကျဝေဒနာသည်တွေဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းလာဖို့ ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်း လိုက်မလုပ်ကြတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လေ့လာမှုပြုသူထဲ ပါဝင်သူတစ်ယောက်ပြောတာကို နှလုံးရောဂါကုထုံးဆိုင်ရာ ဥရောပအဖွဲ့က ကိုးကားဖော်ပြခဲ့တယ်။
ယာဉ်တွေ၊ ဟိုတယ်အခန်းတွေ၊ တိုက်ခန်းတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေထဲမှာရှိတဲ့ ဆေးလိပ်အစအနတွေကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိမရှိကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စူးစမ်းလေ့လာနေကြပါတယ်။ ကြာလာတဲ့အခါ ဆေးလိပ်အစအနတွေဟာ အဆိပ်အတောက် ပိုပြင်းလာနိုင်တယ်။
‘ရွှင်လန်းနေတဲ့စိတ်နှလုံးဟာ ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ပဲ။ ကြေမွနေတဲ့စိတ်ကတော့ ခွန်အားဆုတ်ယုတ်စေတယ်။’—သုတ္တံ ၁၇:၂၂၊ ကဘ။
“ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို ညစ်ညူးစေသောအရာရှိသမျှတို့နှင့် ကိုယ်ကိုကင်းစင်စေလျက် . . . နေကြစို့။”—၂ ကောရိန္သု ၇:၁။
သင်ဘယ်လောက် အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်မလဲ
ကျွန်ုပ်တို့ အိုမင်းပြီး သေဆုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်မလဲဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ | သမ္မာကျမ်းစာဟာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လက်တွေ့ကျသေးရဲ့လား
နိုးလော့! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ | သမ္မာကျမ်းစာဟာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လက်တွေ့ကျသေးရဲ့လား